Brushed Nickel တွင်အင်တုံထည့်ထားသော WOW Wow Pot Filler
ပင်မစာမျက်နှာ / မီးဖိုချောင် faucets / အိုး Filler Faucets Brushed Nickel ၌မီးဖိုပေါ်တွင် / WOWOW Pot Filler Faucet
Brushed Nickel ရှိမီးဖိုပေါ်တွင် WOWOW Pot Filler Faucet
double-jointed အိုးဖြည့်တင်းထည်ဂဟေဆော်သောကြောင့် crack သို့မဟုတ်ပုံသဏ္outာန်ထဲကလွယ်ကူသည်။
2311100 installation ကိုညွှန်ကြားချက်
သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်သို့လှပသောပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောလှပသော Wall-Mount Pot Filler 2311100 ဖြင့်အလှဆင်ထားသောအလှဆင်ထားသော silhouette ပါဝင်သည်။
Hardware Features: Signature Hardware ရဲ့သက်တမ်းကန့်သတ်ချက်အောက်မှာအကျုံးဝင်တယ်။
တစ်ခုတည်းအပေါက်နံရံ - တပ်ဆင်ထား setup ကို dual လွှဲအဆစ်ကိုအသုံးမပြုသည့်အခါအိုးဖြည့်ရန်ခေါက်ခွင့်ပြုသည်။
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: အမြင့်: 9-1 / 2″ (faucet ၏ထိပ်ဆုံးသို့အောက်ခြေ) ။
Spout အမြင့်: 2-3 / 4″ (မြို့ရိုးအပေါက်၏ဗဟိုမှ spout ထွက်ပေါက်သို့) ။
Flow Speed: ၁.၈ ဂါလံ - တစ်မိနစ် Faucet ။
SKU: 2311100 Categories: မီးဖိုချောင် faucets, အိုး Filler Faucets Tags: brushed နီကယ်, အိုး Filler, မြို့ရိုးကိုတပ်ဆင်ထား
Pot Filler Faucet ခေါက်နှစ်ဆကိုင်ထားသော Brushed Nickel
စီးပွားဖြစ်နစ်မြုပ် Faucet / Classical /2Handle
H ကို *** ဌ2020-06-14
ငါအများကြီးပိုငွေအဘို့အထွက်ရှိအချို့မြင်ကြပြီ။ ဒီဟာကစျေးကြီးတယ်၊ ငါကပညာရှင်ပီသစွာထည့်သွင်းထားတယ်။
N ကို *** ဌ2020-06-25
ကျွန်မတို့သည်ဤအရာများကိုစည်ပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့တွင်သီးခြားပိုက်များရောနှောခြင်းအတွက်စံပြအကွာအဝေးအစားနံရံကို ဖြတ်၍ လာနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အရာအားလုံးကောင်းစွာလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အလုပ်လုပ်တယ်။ အကြီးစားဆောက်လုပ်ရေး။ ကြံ့ခိုင်ပြီးကောင်းသောဒီဇိုင်း။ သူတို့သည်အစဉ်အမြဲတည်ကြပါစေသော။
, G *** s ကို2020-06-27
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်နှစ်ဆအဆို့ရှင်စနစ်သည်ယင်းကိုပိတ်ပြီးသည့်နောက်အစက်များရှောင်ရှားရန်ကောင်းသည်။ ဒီအိုးဖြည့်တာနဲ့ပြproblemနာကလက်တွေဟာစာရွက်တွေကိုစတုရန်းမိုင်ဘဲကြည့်လိုက်တာနဲ့အနည်းငယ်သေးနေတယ်။ UPDATE - ကုမ္ပဏီကကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုတွေ့မြင်ပြီးလက်ကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ချွတ်ယွင်းသောထုတ်ကုန်တစ်ခုရရှိကြောင်းနှင့်မည်သည့်မေးခွန်းမျှမမေးခဲ့ပါကအသစ်တစ်ခုကိုတင်ပို့ခဲ့သည်။ သူတို့ကမှန်တယ်၊ အသစ်ကကောင်းတယ်။ ဂရိတ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု
အီး *** ဂရမ်2020-06-28
အံ့သြစရာကောင်းတာကဒီအိုးဖြည့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မပြောတတ်ပါဘူး ငါ့အိမ်ကိုလာတဲ့လူတိုင်းကသဘောကျတယ်။ ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကလှတယ်။
L ကို *** ဃ2020-07-01
ဒီဇိုင်းကိုကြိုက်တယ်။ ကြံ့ခိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ် ငါဒီလို Delta မှာအိမ် Depot တစ်ခုမှာဝယ်ခဲ့ပေမယ့်ဒေါ်လာ ၄၀၀ နီးပါးကျခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီသုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပြီးနောက်ငါဒီကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်ရရှိသောအတွက်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်၊ သို့သော် WOWOW ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်နောက်မှဓာတ်ပုံများကိုတင်ပါလိမ့်မည်။ အလွန်ခေတ်မီကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခံစားရပုံကိုချစ်။
: P *** င2020-07-11
ဒီအိုး Filler နှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်မှု။ အကြှနျုပျ၏ရေပိုက်သမားက installed ကြောင့်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ ငါကြည့်လိုက်တာနဲ့စျေးကအရမ်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်တယ်။ ရောင်းသူသည်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းများကိုအလွန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးက *** င2020-07-15
ဒီအိုးဖြည့်တာကိုကြိုက်ပါတယ် အဲဒါဟာဘယ်လောက်ထိလွယ်ကူမယ်ဆိုတာငါဘယ်တုန်းကမှမစဉ်းစားမိခဲ့ဘူး။ ရေကချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းသွားပြီးဘယ်တော့မှမကွဲစေဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ကော်ဖီဘေးတွင်ကျွန်ုပ်၏ကော်ဖီအိုးလည်းရှိပြီးရေလှောင်ကန်ကိုဖြည့်ရန်လက်သည်လက်သည်းထိသည်။
B က *** r2020-07-18
ငါသည်ငါ့ကောင်တာအဘို့အပေါက်လွှဝယ်ယူခဲ့ကြရရန်တန်ပြန်ပြုပြင်မွမ်းမံအောက်မှာအချို့သောအခြားလုပ်ပါ။ ပြီးတာနဲ့၎င်း၏ယခုပြီးပြည့်စုံသော! အဆိုပါလက်ကိုင်အလိုလိုသိနေရာချထားကြသည်မဟုတ်။ တစ်ခုမှာ၎င်းနှစ်ခုစလုံး၏မှန်ကန်မှုရှိစေရန်နှစ်ခုစလုံး၏ဖွင့် / ပိတ်နေရာများကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကပိုက်ဆံအတွက်အလှတရားပါ။
R ကို *** ဎ2020-07-23
ဒီအိုးဖြည့်တာကစျေးသိပ်မကြီးဘူး၊ ၎င်းသည်အရောင်ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖြစ်သည်။ ဒါဟာရှေ့မီးလောင်အထိလမ်းအပေါင်းတို့ကိုဆန့်။ ၎င်းသည်အလွယ်တကူရွေ့လျားနိုင်ပြီးတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းတွင်ကောင်းမွန်သောရေစီးဆင်းမှုရှိသည်။
: D *** င2020-07-25
ဂရိတ်စျေးနှုန်း, မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအလုပ်ဖြစ်တယ်။ finish ကောင်းသော, လျောက်ပတ်သောအရည်အသွေးကိုကြည့်ရှုသည်။ ဆိုပါစို့အခမဲ့ ဦး ဆောင်လမ်းပြ။ အများဆုံးလုပ်ပေးအဖြစ် dual- လက်ကိုင်နှင့်အတူကြွလာစေချင်ပေမယ့်အားလုံးငါအကြံပြုအားလုံးအတွက်။
T က *** ဇ2020-07-26
ငါတို့မီးဖိုချောင်မှအလွန်ကြီးစွာသောဖြည့်စွက်သည်။ အလုပ်လုပ်နေသောကန်ထရိုက်တာကသူကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်တော့မည်ကိုသဘောကျသည်။ အားလုံးကောင်းတယ်! လူတိုင်းကအဲဒါကိုလုံးဝအေးဆေးနေတယ်ထင်ကြတယ်။
V ကို *** ဃ2020-07-27
အရည်အသွေးနှင့်လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူအလွန်သဘောကျခဲ့ပါတယ်။ ငါ့စီးပွားဖြစ်မီးဖိုချောင်အတွက်ကြီးပါတယ် ဘယ်နေရာမှာမဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျိန်းသေအကြံပြုပါသည်။
တစ်ဦးက *** y က2020-08-07
ဒီ faucet ကိုချစ်။ အဆင်ပြေပါတယ်! နှစ်ခေါက်ဖွင့် / ပိတ်လက်ကိုင်သည်မီးဖိုပေါ်သို့တက်ရန်ပူပြင်းသောမီးဖိုကိုမရောက်ရှိရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
L ကို *** r2020-08-15
ငါတို့ရေချိုးခန်းထဲမှာဒီ faucet ကိုသုံးခဲ့တယ်။ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီးကြီးလှ၏!
ကို C *** ဎ2020-08-19
ဒီ faucet ဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အပြင်စျေးနှုန်းကိုမမီနိုင်ပါ။ ငါကချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စိုးရိမ်ခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်ကောင်းကောင်းလုပ်ထားတယ်။
ကို C *** y က2020-08-23
ထုတ်ကုန်ကိုရရှိပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်၏အိုးဖြည့်ဆေးဆေးထည့်သည့်စနစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ PTFE ချည်တိပ်၏ပမာဏလုံလောက်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် install လုပ်ပြီးသည့်နောက်တိပ်အလွန်များသောကြောင့်ကျန်ရှိသော PTFE ချည်တိပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယတပ်ဆင်မှုအတွက်လုံလောက်နေဆဲဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်မှုပြီးစီးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်စမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရေယိုစိမ့်မှုမရှိခဲ့ပါ။
T က *** မီတာ2020-08-29
တင်ပို့မှုသည်မြန်ဆန်ပြီးကျွန်ုပ်သည် ၀ ယ်ပြီးသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထိုပစ္စည်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အသစ်ပြုပြင်ထားတဲ့မီးဖိုချောင်ဟာ faucet ကိုတပ်ဆင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်။ faucet မပါဘဲမီးဖိုချောင်သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ငါနံရံပေါ်မှာအိုးဖြည့် faucet install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်အရည်အသွေးမြင့်သော PTFE ချည်တံဆိပ်တိပ်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ရောင်းသူမှပေးသောအရည်အသွေးမြင့် PTFE ချည်တံဆိပ်တိပ်ခွေကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငွေပမာဏကများလွန်းပြီး ၂-၃ ကြိမ်လောက်သုံးလို့ရလောက်တယ်။
L ကို *** ဌ2020-09-02
ဒီအိုးဖြည့်စွက်ဆေးဘူးကငါ့မီးဖိုချောင်ကိုပိုပြီးထိရောက်စေတယ်။ အရင်တုန်းကရေခဲမုန့်အောက်မှာရေရဖို့ဒါမှမဟုတ်တခြားကွန်တိန်နာတွေနဲ့အိုးထဲကိုရေလောင်းဖို့လေးလံတဲ့အိုးကိုကျွန်မအမြဲသယ်ခဲ့ရတယ်။ ဒါကအလွန်ဒုက္ခပေးပြီးပျင်းစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ငါတို့ရဲ့မီးဖိုချောင်အသစ်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံတဲ့အခါကျွန်မဟာကျွန်မယောက်ျားကိုအိုးတလုံးဖလားကိုတပ်ဆင်ဖို့အောင်မြင်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ Piper pot filler faucet သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ faucet ကိုအလွန်ကျေနပ်မိသည်။ ၎င်းကိုကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးမျက်နှာပြင်သည်အနက်ရောင် electroplated အလွှာဖြစ်ပြီးအလွန်ဂန္ထဝင်နှင့်ကြော့ရှင်းသည်။ ၎င်းကိုမီးဖိုချောင်တွင်တပ်ဆင်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏မီးဖိုချောင်၏ကြယ်ပွင့်ဖြစ်လာသည်။ ကျနော်တို့တပ်ဆင်ရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရေပိုက်သမားငှားရမ်းကတည်းကအားလုံးချောချောမွေ့မွေ့သွား။ , wowow အိုး Filler faucet ယခုအချိန်အထိတောက်ပအလုပ်လုပ်လျက်ရှိသည်, ငါကကြိုက်တယ်!
N ကို *** ဎ2020-09-08
ထုတ်ကုန်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသောသေတ္တာသည်သတ္တုနှင့်ဆန့်ကျင်သောသတ္တုစပ်ခြင်းမရှိဘဲတင်ပို့ခြင်းကိုခွင့်ပြုခဲ့သည်။ နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသောအပိုင်းသည်ဆောက်လုပ်ရေးအသစ်မှကျွန်ုပ်တို့ကြည့်နေစဉ်ထရန်အလွယ်တကူဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှိပြီးသားမြို့ရိုးသို့ချပြီးပြောဆိုရန်မတတ်နိုင်။ အဆိုပါထုတ်ကုန် coupler install လုပ်ဖို့ allen လိမ်ဖဲ့ခြင်းနှင့်အတူကြွလာ။ သူတို့ woudl မှာ teflon တိပ်သေးသေးလေးတွေထည့်ထားရင်မယုံနိုင်စရာဖြစ်ပေမယ့်ရေပုံးနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့မည်သည့် tool box မဆိုရှိနှင့်ပြီ။ အဆိုပါလက်စွဲကိုလိုက်နာဖို့လုံလောက်တဲ့လွယ်ကူသည်။ သင်ဖောင်များကိုသင်ဖြည့်စွက်ရန်သင်အလိုအလျောက်တပ်ဆင်ထားသင့်သည်ကိုသိရန်အင်တာနက်ကိုစစ်ဆေးပါ၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်သင်၏အကွာအဝေးအထက်ရှိမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ကိုမထိပါနှင့်။
R ကို *** t ကို2020-09-19
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကငါတို့အိုးဖြည့်ပါတ်ပါပြီ, လူတိုင်းသံသယနှင့်ငါလုံးဝမှာအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းခဲ့သည်။ သူတို့မှားတယ်။ သင်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှဤအိုးဖြည့်စွက်ခြင်းကသင့်အားလေးလံသောအိုးကိုမီးဖိုသို့မသယ်ဆောင်ရန်ကူညီပေးသည်။ စားဖိုမှူးသို့မဟုတ်နေ့စဉ်ချက်ပြုတ်သူမည်သူမဆိုသည်ဤအရာကိုနှစ်သက်ကြပြီးအသုံးဝင်လိမ့်မည်။ ငါဒီဇိုင်းနှင့်ထိတွေ့ချစ်ကြတယ်။ မီးဖိုပေါ်၌၎င်း၊ အိုးတလုံးသည်အပူ၏ထိပ်တွင်ရှိနေသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၌တစ်ခုတည်းသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာ၎င်းသည်မည်သည့်ပျက်စီးမှုဖြစ်စေနိုင်သနည်း။ ငါ့မှာ burner (၆) ခုရှိပြီဆိုတော့အိုးအဆာရဲ့ထိပ်မှာရှိတဲ့ burner ကိုမသုံးဖို့ငါကြိုးစားတယ်။ အကြံပြုပါသည်
ငါ *** ဎ2020-09-27
လှပပြီးအလွန်ကောင်းစွာလုပ်အိုးတလုံး။ စျေးနှုန်းပိုမိုမြင့်မားအရည်အသွေးမမြင်ရကြပြီ Installation ကိုအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့။ နောက်တဖန်မပါဘဲပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ပစ္စည်းအလွန်ထုပ်ပိုးခဲ့သည်, ထိုယူနစ်ထဲမှာမသေချာသောပျင်းရိမရှိ။ ကြံ့ခိုင်ချောမွေ့ အပြီးသတ်ပြီးပြည့်စုံသည်။
L ကို *** ဃ2020-09-29
ဒီအိုးဖြည့်တင်းမှုကိုလှပစွာပြုလုပ်ထားပြီးကျွန်ုပ်၏မီးဖိုချောင်အသစ်ထဲသို့ထူးခြားသောထပ်ပေါင်းထည့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်သည်။ အကြှနျုပျ၏ရေပိုက်သမားအလွယ်တကူအိုး Filler installed ။ ၎င်းသည်တည်ငြိမ်ပုံရပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်၏မိသားစုအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာပျော်ရွှင်မှုပေးလိမ့်မည်။
: D *** y က2020-10-03
လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်း, ကြီးလှ၏။ အစိုင်အခဲနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများသည်ချောမွေ့သည်။ သာတစ်ပါတ်ကအပေါ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဝေးကိုလိုပဲ
N ကို *** င2020-10-07
WOWOW သံလိုက်နှင့်အတူမီးဖိုချောင် Faucet အကောင်းဆုံးဆွဲထုတ် ...